Ngokuvamile izitho zokuphefumula kukhona esangweni esiyinhloko Ukungena kwamagciwane. Kuyinto isheshe lapho isifo mass. Ngokuvamile kuba khona ulwelwesi lwamafinyila kusukela ukutheleleka ukuba wehle yezinkinga senze yinto ehlukile. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuhlangabezana abantu abaningi nokuthi ushintsho zonyaka kuthinta rhinitis, sinusitis.
Ukuqeda umkhuhlane, professional, odokotela batusa izidakamizwa "Izofra". Kuziwa ngesimo spray, futhi amathonsi acinene. It kungabonakala kokumhlophe ibhodlela le plastic 15 ml nge umlomo wombhobho spray. Ngaphambi ukusebenzisa, udinga ukufunda imiyalelo izidakamizwa "Izofra". Amazwana (izingane kusho futhi kusebenza) ikakhulukazi omuhle ngakho.
Isakhi esiyinhloko kule izidakamizwa - framycetin. limelela-antibiotic eqinile ongoweGceke aminoglycosides iqembu. Ngo isampula 100 ml "Izofra" imayelana eyodwa igremu framycetin sulphate. Kule singaphetha ngokuthi iyasiza futhi ngempumelelo ekubhekaneni anhlobonhlobo izifo kanye amagciwane. Ngokwesibonelo, Streptococcus, Pseudomonas, Enterobacteriaceae.
Umuthi 'Izofra ": isicelo
Ingabe ngokuvamile esetshenziselwa ukwelapha sinusitis, rhinitis kanye nezinye izifo. Ngemva kokuhlinzwa, iziguli eziningi kokuba ebekwe lokhu remedy. Ukuze kahle ufunde indlela yokusebenzisa lokhu izidakamizwa, kufanele kuqala kahle uxubha ekhaleni, kuyinto efiselekayo ngisho ngensipho. Ngaphezu kwalokho, bafake ekhaleni spray. Umuthi uzobe ezimbi jetted lapho ngokutshekisa ibhodlela bese ucindezela dispenser. Abadala Kunconywa ukusebenzisa kusukela ezikhathini 4 kuya ku-6 ngosuku, kanti izingane - izikhathi ezimbili noma ezintathu. Feza le nqubo kumele kube kwezinsuku eziyishumi, kodwa kungcono uye kudokotela uyofuna icebiso. Ngokuphathelene ukweqisa izidakamizwa ke lokhu kungekho idatha, ngoba igazi uthola esincane kakhulu leso sidakamizwa. In an icala ngokwedlulele, uma izidakamizwa asifanele "Izofra" umzimba wakho, analogs ungakwazi ukuxazulula le nkinga. Eminye imininingwane ngeke ukuchaza ngezansi.
Imiphumela engemihle kuyoba uma leli thuluzi ukusebenzisa izinsuku isikhathi eside kunaleso 10. Kungabangela izifo ezifana nemvubelo. Abanye abantu iguliswa khona. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukusetshenziswa okungafanele noma nokunwetshiwe kungaholela namagciwane amelana noma umlutha amagciwane ayingozi. Contraindicated ukusebenzisa leli thuluzi uma imithi elwa namagciwane hypersensitive ezikubhizinisi iqembu aminoglycosides.
Futha "Izofra" izingane: Umhlahlandlela
Izingane nabancelayo avame aphathwe nale ejenti. Kodwa kunoma isiphi isimo kufanele wasondela ngokucophelela futhi ngokuqapha. Noma yimuphi imithi elwa namagciwane kungaba ukulimaza umzimba ezikhulayo, isibonelo, ukuphazamisa ibhalansi microbial, noma abangele komzimba. Kulaba izimali akusiyo imithi elwa namagciwane njengoba elimazayo, ngakho odokotela kanye abakhiqizi ngokwabo linqume ngokuphephile izingane kusukela ngonyaka owodwa. Ngisho igcwaliswe ucwaningo emitholampilo ukuze afakazele ukuthi izidakamizwa kuphephe ngokuphelele futhi ngempumelelo. Ikani has a ifomu elula, ngakho-ke kulula ukusingatha le mucosa acinene. Ungesabi kwamaphilisi ezikuyo. Esikhathini igazi uthola esincane kakhulu isithako esebenzayo, le nkulumo ayinankinga empilweni. Odokotela bavame linqume le imithi nge ubovu osenyameni evela ekhaleni, ne isikhathi eside aluphumeleli umkhuhlane, sinusitis futhi otitis. Uma lokhu izidakamizwa kuzokwenza ukusabela iguliswa, kufanele ngokushesha xhumana nodokotela wakho.
Medicine "Izofra": lactation, nokukhulelwa
Umthelela ongemuhle fetus ukufukamela akukho lwazi. Zizwe ukhululekile ukusebenzisa izindlela ukuqokwa kanye nokubonisana nodokotela. Kungcono ukulawula yonke imithi ukuthi kufanele uthathe ngesikhathi sokukhulelwa.
Eminyakeni ethile edlule, odokotela professional nososayensi inhlolo-vo ekusetshenzisweni kwezimali "Izofra" ezinganeni kuze ngonyaka. Abahlanganyeli izingane nge sinusitis, futhi catarrhal ubovu rhinitis. Umuthi isetshenziswa kathathu ngosuku, omunye umjovo ku ekhaleni. Lokhu kwakwenziwa iveke yoke. Akekho kwadingeka ukusabela nomzimba. I ezithakazelisayo kakhulu ukuthi 65% of the lababekhona laba alulame ngokugcwele ngemva kwezinsuku ezinhlanu. ukuphathwa Pi nezinye izidakamizwa, odokotela baye baqaphela yalokho omuhle kwezinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela.
Benza olunye experiment ukunquma ukwelashwa effektnosti ka adenoids. Iziguli abakhethelwa njengoba izingane adenoids 3 kanye 2 degrees. Ngosuku 3, kuye kwabonakala ukuthuthukisa ukuphefumula. Amahora angu-10 e eziyisikhombisa kweziyishumi iziguli wembula ukuthi lingekho ukuvuvukala. Izikhundla eziyisihlanu kweziyi-degree ekwelapheni adenoids wesithathu emva kokwelashwa kwehle ngezinga yesibili.
Futhi kuthiwani ukulungiselela "Izofra" Izibuyekezo? Ezinganeni, njengoba kushiwo ngenhla, i-izidakamizwa futhi ofanele. Kukhona inala izibuyekezo abazali abaye ukuthenga ithuluzi bona noma inzalo yabo.
Ngokwesibonelo, ingane kungazelelwe yavela abandayo. Ngaphezu kwalokho, ngisho lokushisa wasukuma ukuze degrees 38. udokotela Kuncono kungenzeka ukuhlaziya isimo ngokubhuduzela, akunikeze imithi ingane "Izofra". Ngisho noma umphumela ngemva isicelo sokuqala abazange bakuqaphele, bazoqhubeka ukuyisebenzisa njengoba kwayala udokotela wakho isikimu. Ngokuvamile ku itheku nezinye izifo wasebenzisa kusho "Izofra". Analogue ngakho, yebo, akukubi kakhulu nangempumelelo ukuyisebenzisa.
Kukhona amacala lapho izindlela ebekiwe izingane ngesikhathi teething. Le nkathi siphela ekugwedleni, ngezinye izikhathi ngisho nge umkhuhlane omubi. Futhi kulokhu, ingane lula spray "Izofra". Ukubuyekezwa (umkhiqizo zezingane Balisebenzisa, ngakho-ke kubalulekile ukwazi kubo) bathi izimpawu ezingemnandi kuyaqedwa ngokushesha, nokungezwani komzimba nezinto musa kwenzeke yini.
Ithuluzi liyasetshenziswa ngesikhathi abandayo nge osenyameni oluhlaza. Imithi kungasiza ikhambi ngesikhathi esifushane. ENT odokotela linqume njengethuba ikhambi eliphumelelayo rhinitis esindayo, ngaphandle ayinangozi ngokuphelele umzimba.
I amathonsi ungayithola enye
Uma izidakamizwa kungasizi "Izofra" analogue zingatholakala, bayoba engengaphansi ezikhexisayo. Ngokwesibonelo, izidakamizwa "Sinupret", "Otrivin" "Evkazolin", "Santorini" nabanye. Nabo futhi, athandwa kakhulu ekwelapheni izifo ngenhla. Kufanele yini kube buhlungu ukube ezinye izindlela ngeke kusize. Zama ukuthola imithi ephumelelayo futhi izinga. Ungakhohlwa ubonane Udokotela onguchwepheshe. Kulokhu kuba ngokuphelele kuphephile ukusebenzisa spray "Izofra" izingane. Inani analogue ingahluka, isib, izindlela eziphumelelayo "Zyrtec" kufanelekile izingane kusukela ezinyangeni ezingu-6 futhi kubiza ngokwesilinganiso ruble 200-300. imithi Ovelele "Nazol Baby" yenzelwe izingane ezivela izinyanga 2 futhi kubiza ngokwesilinganiso ruble 100-200.
Indlela eyolanda iconsi
Empeleni, lesi sidakamizwa "Izofra" Isifaniso buye bashintsha kokubili ukwakheka kanye intengo, ngakho isicelo lesifanele kufanele kudokotela. Pharmacy a inala izindlela ezifanayo. Zula ngangokunokwenzeka futhi ngentengo uzobe ebiza kakhulu. Uma akanandaba, zama ukukhetha umenzeli ngempumelelo futhi iphephile ukuthi kungaba fafaza "Izofra". Analogue, intengo okuyinto ehlukile, akuyona ayisasebenzi.
Sithemba ukuthi lonke ulwazi uthola kulesi sihloko
Electric BMW: samanje nezingane
Ukukhetha izindlu izingane: imikhiqizo plastic - ukhetho best